Dstu: ikhono. Don State Technical University (Rostov-on-Don)
Uma ufuna ukuthola imfundo lobuchwepheshe e eningizimu yeRussia, nakani kwabo DSTU, ukuthi iminyango ukukhiqiza inombolo enkulu ongoti abaqeqeshiwe ngonyaka. Ngonyaka zezemfundo 2015/2016, inyuvesi silungiselela ochwepheshe 88 amakhono, eziningi zazo - luyingxenye lobuchwepheshe.
Umlando we nyuvesi
Ngo-1930, ngesikhathi isiqongo embonini kwetinhlavu USSR, iziphathimandla waba necebo ukwenza isimo zezimboni, ukuthola inzuzo enkulu ekulimeni. Yingakho isikhathi sidalwe owandulela Dagestan State Technical University (Rostov-on-Don) - North-zaseCaucasia Institute of Agricultural Engineering, yakhelwe ukuze akhulule Don Polytechnic Institute, ngubani wayengasenakukwazi ukubekezelela imisebenzi ukuqeqeshwa.
Kuyo yonke le ndawo yayikhona ngokuphindaphindiwe nyuvesi iye yashintsha igama layo, futhi wamanje kwaba kakhulu muva - kowezi-2000 emva kwesikhathi. Inani eliphakeme izikhungo zokuthuthukisa waqala maphakathi nawo-1980: yayibizwa ithuthukiswe uchungechunge imishini yezolimo alungele ukuvunwa wokusanhlamvu tillage. Automation wezoLimo eyenziwa usebenzisa umshini athuthukiswe ngesisekelo University, ngeke ukwandisa umkhiqizo. Naphezu inhlekelele yama-1990, lesi sikhungo liqhubekile futhi ukukhiqiza ochwepheshe ephezulu ikilasi emkhakheni wezolimo, ukuze esikhathini esizayo agweme ukushoda kwabasebenzi.
Dagestan State Technical University (Rostov-on-Don) namuhla
Okwamanje, le nyuvesi ingenye yezindawo okuholela phakathi kwazo zonke izikhungo onguchwepheshe ukuqeqeshwa abalimi. Le nyuvesi elikhulu eningizimu yeRussia ivumela abaqeqeshiwe ezindaweni 200, zazo 70% ezihlobene amaphrofayli ubunjiniyela kanye lobuchwepheshe. abafundi abasanda kuphothula umatikuletsheni ziphoqa okusezingeni eliphezulu emakethe yezabasebenzi, bavame ukuthola umsebenzi kwezobunjiniyela, Metallurgical nemabhizinisi zezimboni lempi.
Don State Technical University uqhuba eziningana amaphrojekthi ezintsha okuhloswe ngayo ukwenza ngcono imisebenzi zemfundo. Omunye wabo - kumiswa neminyango wezamabhizinisi, ubuhanjelwe amabhizinisi enkulu eningizimu yeRussia. Le nyuvesi ngenkuthalo ubambisana abalingani angaphandle, ngaphezu, lokhu lapho Bologna club livuliwe, okuyinto kuphela igatsha lenhlangano kuleli zwe.
Uma uhlela ukuxhuma ukuphila kwakhe ezolimo, ngesibindi zisebenze DSTU, amandla akhe kukhona amaqoqo ezinamandla yolwazi, zanqwabelana phezu eminyaka esebenza. Le nyuvesi usebenza amandla phezu 15, ethandwa kakhulu zazo yilezi: "Imishini eziyinkimbinkimbi agroindustrial" futhi "Neftegazopromyshlenny".
Ngaphezu ezindaweni komkhakha wakuleli wezolimo, kungenzeka ukuba sicabangele eminye iminyango, ezifana "Ubuchule Business Management", "Management and Entrepreneurship". Ukuqeqeshwa kulezi amakhono wenziwa ngendlela yokuthi ulwazi okuholela eyunivesithi singasetshenziswa kokubili Agro-zezimboni ensimini, futhi iyiphi enye.
DSTU, ikhethelo okuyizinto ngokwanele eziningi, ngonyaka siqeqesha abafundi mayelana 15,000, okuhlanganisa izivakashi zakwamanye amazwe. Ezinye zezindawo nyuvesi ezihlongozwayo, ethandwa kakhulu yilezi: "Isevisi Nezokuvakasha" futhi "Engineering". Minyaka yonke inqwaba abafundi ivame ukuba uthole lapho.
Lapho ekhetha okukhethekile, qiniseka ukuba banake yokuthi ezinye zazo zitholakala kuphela ukuze undergraduate, futhi abanye - kuphela ukuqeqeshwa ngendlela magistracy. Ezinye ubuchwepheshe atholakala kuphela ifomu ikhokhwe ukuqeqeshwa, ngoba isimo akusho ukwaba uxhaso zavela. Ngaphambi isicelo lokhu noma lokhuya isiqondiso, qinisekisa ukubheka nehhovisi wokwamukela nge lonke ulwazi olufanele mayelana nakho.
Uma unquma ukufunda e DSTU, kuyongenwa afuna ukuthi unikeze isethi ejwayelekile kwemibhalo, kanye lonke ulwazi olufanele mayelana enyuvesi wena. Sikhuluma isitifiketi wahamba esikoleni (idiploma ye ekolishi), iphasipoti, isitifiketi ezidlulisela ukuhlolwa, izithombe, kanye wonke amadokhumenti ezibonisa ukuthi ungumfundi lisho ukuthi ubani ofanelwe reception oyinhloko (amadiploma ke futhi izitifiketi, izitifiketi wezokwelapha ukuthi une abakhubazekile, nokunye. d.).
Awuzange wadlula ukuhlolwa? Ungesabi nakancane, kungenziwa ngqo eyunivesithi lapho ufaka isicelo. Nakani khona amaphuzu idlula, okuyinto udinga ukudayela ukubamba iqhaza emncintiswaneni esizayo. Uma uthola njalo kumele lenze isitifiketi esikhombisa izivivinyo e isiRashiya, izibalo kanye Into yesithathu kuzohluka: kungenzeka ukuthi i-physics, umlando, amakhemikhali nokusebenzelana kwawo kanye nezifundo social.
Uma ungafuni ukuya Rostov-on-Don for yokwemukela DSTU, amagatsha inyuvesi - isinqumo ezingase ezikufanelayo. Amahhovisi Division asezindaweni Pyatigorsk, Volgodonsk, laseStavropol, izimayini, eTaganrog Azov. Kwezinye izifunda, amagatsha igama elihlukile ngokuphelele, isibonelo, laseStavropol division ngokuthi Technology Services Institute. Kusukela ngo-1959 kuya ku-2009, njengoba kungaba njalo egatsheni nyuvesi babukhona Institute for Amandla Engineering DSTU.
Ukufaka noma igatsha le-Dagestan State Technical University, ikhono okuyinto ukukhiqiza kufika ku eziyinkulungwane 15 unqambothi ochwepheshe unyaka ngamunye, udinga ukwenza konke izimo efanayo ngoba yokwemukela "ikhanda" kwegatsha inyuvesi. Ngaphezu kwalokho, ukuqeqeshwa eminyangweni ezithile inyuvesi ishibhile. Ukuze ekugcineni anqume umuzi, ofanele kakhulu ukuqeqeshwa, sicela uthintane ikomidi Ukukhetha futhi uzothola lonke ulwazi oludingekayo on amagatsha ozithandayo.
Uma ungakwazi ukuthatha izinyathelo umnyango Isabelomali Dagestan State Technical University, okukhethekile odingeka okusezingeni eliphezulu emakethe yezabasebenzi, ikomidi yokwamukela abasebenzi inyuvesi ngeke sikunikeze ukuqeqeshwa ikhokhwe. Izindleko zemfundo kuleli yaseyunivesithi ruble 50 kuya kwezingu-120, futhi lokhu kuzoya okukhethekile abakhethiwe. Eqolo esigcwele imfundo kuyoba for labo enyula lunye ka "Izindiza" noma "Cryogenics".
yokufunda Ibanga inikezwa ngenani enengqondo: ruble 18 kuya kwezingu-36, kuye ngokuthi okukhethekile. Lapho efundisa amagatsha inyuvesi kuzobiza okuningi kancane futhi wenze kuze kube ama-ruble ayizigidi 60 ngokuba esigcwele futhi kuze 30 ayizinkulungwane - kule izincwadi. Yingakho izicelo eziningi zithanda ukungena emahhovisi inyuvesi, ngakho ungagcina imali.
Uma senze DSTU (Ikheli:., Rostov-on-Don, Gagarin Square, 1) futhi zivela kwelinye idolobha, ungazama ukuthola indawo ehostela. Sekukonke, le nyuvesi usebenza 8 zokulala abafundi. Ukuze babe izakhamuzi zalo uzodinga ukubhala isicelo esihambisanayo ukulaliswa esibhedlela. Indlela idokhumenti, ungathola ngokuxhumana ekomidini yokwamukela University.
Izindleko zokuphila emphakathini dorms isukela ruble 400 kuya ku-800 ngenyanga. Konke kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi egatsheni umfundi futhi uhlobo cwaningo ukhona. Ngaphezu kwakho konke kufanele ukhokhe abafundi iziqu kanye nabasebenzi yesivumelwano. Lesi sivumelwano ngokuvamile kwenzeka ngasekupheleni kuka-Agasti, ulwazi lemininingwane mayelana nokuthi lokhu engcono acaciswa ngawo ekomidini Ukukhetha.
ukuqeqeshwa Okwandulele inyuvesi
DSTU, ogama amandla kakhulu ziphoqa kulabo abafuna ukuthola okukhethekile lobuchwepheshe, umema bonke abafisa uvakashele izifundo wokulungiselela. Ngisho noma ungasebenzi, izifundo - yindlela enhle yokuthuthukisa amakhono abo, bathole ulwazi olwengeziwe endaweni kwesokudla, futhi ngesikhathi esifanayo futhi anqume ukuthi umsebenzi ekhethiwe ikufanele wena ngempela.
Labo babe akuphelele imfundo yesibili (9 amakilasi) kungaba ukubhalisa kwelinye izikhungo eziningana SPO, okwathi ngemva kwalokho uyothanda ukubona University. Sikhuluma lolimi DSTU, lyceum lobuchwepheshe, zezindiza nasemakolishi ubunjiniyela kagesi, kanye College of Economics, Ukuphathwa kanye noMthetho. Ukwamukelwa kulezi zikole wenziwa ngokuvumelana zemithi ejwayelekile, kujwayelekile yesibili zemfundo sokufundela amakhono omsebenzi.
Don State Technical University imatasa ekusunguleni oxhumana ngamazwe. ukuzimisela kwayo ukubambisana DSTU kakade ukuthi amanyuvesi mayelana 50 ezivela emhlabeni wonke. Kulindeleke ukuthi abafundi nothisha uzoqhubeka bahlanganyele izinhlelo exchange futhi ukufunda kwamanye amazwe.
Ngaphandle yini enye, kuba Dstu Academy football Real Madrid lavulwa ngo-2013. Kuyinto kuphela sikhungo eRussia futhi ukwenza abafundi ukuqeqeshwa nabafundi abasengozini ngokuya izindinganiso zomphakathi. Bologna Club, kuphela eRussia, ubuye isihloko ukuziqhenya University, kulapha lapho kwakhiwa zoMthetho omusha Imfundo WaseRussia.
Isifundo phesheya: I-amathathu amane ebhekene
I kwesakhiwo yamangqamuzana ifomula: acetylene
Sumy State University: Ikheli, neminyango, amakhono
Indlela Khetha yolimi lwesiNgisi Yiqiniso
Ubani owasungula le ibhaluni? Montgolfier abazalwane. A ibhaluni ne ubhasikidi
Vest-Trendy eyenziwe ngesikhumba semvu - lo mkhuba isizini
Manor "Trigorskoye" - Museum. Incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Isikhundla ezindawo ka the nezimfunda. isikhundla ezemvelo emathafeni ase
Okuqukethwe caloric yebhali nezingcezwana izinzuzo zayo
Sifunda izimfihlo ukupheka bhisikidi Italian "biscotti": iresiphi kanye omisiwe izithelo, lemon ikhofi
Russia zabesifazane kazwelonke volleyball ithimba ngosuku olwandulela le midlalo yama-Olympic
Cornflower izingubo blue: ukukhetha ingubo langempela
Lapho "Buranovskie ugogo?" Umlando likasoseshini, umsebenzi, isakhiwo
I asalile value - benza namabalazwe amazinga ibhizinisi